စီးပွားရေး Blogging အတွက်ပြောင်းလဲခြင်းမက်ထရစ် Martech Zone
စီးပွားရေး Blogging အတွက်ပြောင်းလဲခြင်းမက်ထရစ်
တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 11, 2010 တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2014 Douglas Karr
လူမှုမီဒီယာလောကတွင်ဘလော့ဂ်၏အောင်မြင်မှုကိုမှတ်ချက်များကဲ့သို့သောစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။ ငါမကျင့်ဘူး ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အဲဒီမှာပါတဲ့မှတ်ချက်တွေအကြားဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ မှတ်ချက်များသည်ဘလော့ဂ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်သောအရာမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါ။
ငါမှတ်ချက်တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် link baiting headlines၊ အငြင်းပွားဖွယ်အကြောင်းအရာများနှင့် snarky blog post များကိုရေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ငါ၏အဓိကပရိသတ်ကိုဆုံးရှုံးစေပြီးမှားယွင်းသောလူများကိုပစ်မှတ်ထားလိမ့်မည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များစာမျက်နှာပြောင်းခြင်း - ကျွမ်းကျင်သူအတော်များများသည်သင်မည်မျှရှာဖွေတွေ့ရှိသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် search engine အသွားအလာကိုအာရုံစိုက်သည်။ သို့သော်သင်မည်မျှဆုံးရှုံးသည်ကိုသင်မဆုံးရှုံးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ပြားချပ်ချပ်စာတိုက်ခေါင်းစဉ်များကိုရေးပါကသင်၏ meta data သည်မအောင်မြင်ပါကသင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်လူများကသင်၏ link ကို နှိပ်၍ မရပေ။ အသွားအလာကိုပြောင်းလဲစေပြီးသင်၏ meta ဖော်ပြချက်များကိုသော့ချက်စာလုံးများနှင့်သေချာစွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်အောင် post ခေါင်းစဉ်များရေးပါ။ အသုံးချ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် Google Search Console ဒီရလဒ်တွေ။
လှုပ်ရှားမှု Conversions ကိုခေါ်ပါ - ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်လည်ပတ်သူများသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်သို့ဆင်းလာပြီးသင်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ရန်ထွက်ခွာခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေခြင်းကိုပြုလုပ်နေသည်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်သူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်လမ်းကြောင်းပေးနေသလား။ မင်းမှာထင်ရှားတဲ့အဆက်အသွယ်ပုံစံနှင့်လင့်ခ်ရှိပါသလား။ သင်၏လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ထုတ်ပါသလား။ သင့်တွင် visitors ည့်သည်များနှိပ်နေသည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောခေါ်ဆိုမှုများရှိပါသလား။
ဆင်းသက်ခြင်းစာမျက်နှာပြောင်းလဲခြင်း - သင်၏ visitors ည့်သည်များသည်သင်၏ Call To Action ကိုနှိပ်ပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုပြောင်းလဲစေသည့်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့သူတို့ရောက်သွားသလား။ မင်းဌလားစာမျက်နှာမသန့်ရှင်းဘဲမလိုအပ်သောအညွှန်းများ၊ လင့်ခ်များနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများမရှိခြင်း ဒီဟာကရောင်းနေတာမဟုတ်လား
ဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုသင်ရရှိရန်အတွက်သင်၏အလားအလာသည်လမ်းအဆင့်တစ်ခုစီတွင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်သူတို့၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာ (SERP) ပေါ်တွင်သူတို့၏ကလစ်ကိုဆွဲဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားယုံကြည်မှုရရှိရန်၎င်းတို့အားသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပေးရမည်၊ နက်ရှိုင်းစွာတူးရန်တွန်းအားပေးရမည်။ ၎င်းတို့အားစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးရမည်။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်ကောင်းမွန်သောဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာကဲ့သို့သင်နှင့်၎င်းတို့အားသင့်အားဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုပေးရမည်။
အကျဉ်းချုပ် ဤအလေ့အကျင့်အပေါ် execes!
ပထမဦးစွာ: ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ် စီးပွားရေး Blogging ROI တွက်ချက်မှုCompendium သည်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိပြီးကောင်းစွာရေးထားသည် - အသွားအလာအချို့ဆွဲဆောင်ရန်သေချာသည်။
မှတ်ချက် - Compendium သည်ပထမရှာဖွေမှုမဟုတ်ဘဲရှာဖွေမှုအတွက်ဒုတိယရလဒ်ရှိကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်သည်အစထက်စာမူ၏အဆုံး၌ Compendium Blogware ရှိခဲ့လျှင်ရက်စွဲနှင့်စာရေးသူအချက်အလက်ကိုဖျက်သိမ်းပြီး meta ဖော်ပြချက်သည်ပိုမိုသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောဘာသာစကားရှိပါကထိပ်ဆုံးအဆင့်ရလဒ်ကိုထုတ်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ (meta meta ဖော်ပြချက်သည်သော့ချက်စာလုံးဖြင့်စတင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ) ထိုပြောင်းလဲမှုများသည်သူတို့၏နှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆတိုးနိုင်သည် ဘာသာပြောင်း ဒီရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှစာမျက်နှာရလဒ်။
ဒုတိယအ: ၎င်းသည်နှစ်ခုကိုအာရုံစူးစိုက်စေသည့်ကောင်းမွန်သောအတိုချုပ်ရေးသားချက်ဖြစ်သည် အပိုဆောင်းအရင်းအမြစ်များ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာတွက်ချက်ရန်။ ဒါကအစိုင်အခဲ, သက်ဆိုင်ရာ post ကိုပါ!
မှတ်ချက်။ ဒီတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတစ်နည်းကတတိယအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ the ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ် အမှန်တကယ် ROI Toolkit ကိုအရေးယူပါ။
Compendium ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည် ၄ ​​င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများကိုအပြည့်အဝအသုံးချခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ Compendium သည်အခြားမည်သည့်အရင်းအမြစ်များထက်မဆိုရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်များမှတစ်ဆင့် ဦး ဆောင်မှုပိုမိုများပြားသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သူတို့စမ်းသပ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်းကိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သောအလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်!
အပြည့်အဝထုတ်ဖော်ပြသခြင်း။ ကျွန်ုပ်သည်အစုရှယ်ယာများပိုင်ဆိုင်ပြီး Compendium Blogware ကိုစတင်ကူညီခဲ့သည် ငါ့လိုဂို!)
Tags: စီးပွားရေး bloggingပြောင်းလဲခြင်းမက်ထရစ်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်
Shift 2009 XNUMX ဖြစ်ပျက်
Content Science: သင်၏ Plain Jane link များကို Killer Contextual Content သို့ပြောင်းပါ